အစိုးရအနေဖြင့် ကေအိုင်အေဒေသအား အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းကို ကလိုထူးဘောတပ်ဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ) ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် | MoeMaKa Burmese News & Media
အစိုးရအနေဖြင့် ကေအိုင်အေဒေသအား အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းကို ကလိုထူးဘောတပ်ဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ) ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
January 5, 2013ဇန်န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၂
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:မှတ်စုမှတ်တမ်း	4 Responses to အစိုးရအနေဖြင့် ကေအိုင်အေဒေသအား အပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းကို ကလိုထူးဘောတပ်ဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ) ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် Karing Zau Gun on January 6, 2013 at 7:34 am ကချင်အမျိုးသားတစ်ယောက်နေ နဲ့ ညီအစ်ကို’ဆွေကရင်’ တို့အား ရင်ထဲကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Than Win Naing on January 6, 2013 at 12:31 pm ကောင်းပါတယ် ကျနော်လည်း ကယန်းတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ ကျနော်တို့အားလုံးတမြေထဲနေတရေထဲသောက်တဲ့ညီအစ်ကိုတွေပါဘဲ ။ မိတ်ဆွေပါဘဲတို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးဟာ၊
K D on January 8, 2013 at 1:06 pm ကျနော်လည်း ကရင်နီ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ထောက်ခံတယ်။
thaung yin kyai on January 9, 2013 at 8:52 am very good for all. go on.
မောင်တူး - သက်ရှိပန်းချီ - အပိုင်း (၁၇)	စောဝေ - အဖေတူသားများ	HTC One M9 မိတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - ကြိုဆိုနေသူတွေ	ကိုသန်းလွင် - ကျောင်းကောင်စီ	ဆောင်းလူ - အပြာကား	မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သရုပ်ဆောင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်	1MB ကို ၆ ကျပ် ပဲကောက်ခံမည့် အူရီဒူး ရဲ့ “ ဖလန်းဖလန်းအင်တာနက်”	ကာတွန်း လိုင်လုဏ် - မီးလင်းကုန်ပြီ	မောင်စိုးချိန် - ကျောင်းသားသပိတ် အရေးတော်ပုံ (၈)	မိုးမခ Kindel Store
လူမှုရှုခင်း ကောက်စာများအိမ်ကွင်း၊ အဝေးကွင်း (Zaw Aung (Mon Ywa)
ဟိုချီမင်းမြို့သို့ အလည်တခေါက် အလည်ရောက်တယ် (Zaw Aung (Mon Ywa))
မြန်မာပြည်မှာ လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့ ဘယ်သူပြောသလဲ (ပေးစာ)
စိုင်းမောက်ခမ်းနေခဲ့သည့် အလုံမြို့နယ် အထက(၄) အကျင့်ပျက်ခြစား သက်ရှိမြစ် ဧရာဝတီ
စာပဒေသာ ကောက်စာများမနှင်းဆီ - သူစိမ်းတွေပေါ့ ...
Cho Tu Zaw - လှိုင်သာယာမှာ . . . နိုင်ငံရေး မရှိဘူး
ခိုင်မာကျော်ဇော - လိုင်ဇာ ကျောက်စာ
မိုးမခမှာ အသစ်တင်တိုင်း သင့်အီးမေးထဲကို အရောက်ပို့မယ်။ Email Address	နှစ်အလိုက် ပြန်ရှာရန်	Select Month
မိုးမခမျက်နှာ Western Union စာအုပ်မြင် ချစ်ခင်ကြပါစေ …	MoeMaKa Monthly မေလထုတ် ထွက်ပြန်ဘီ တဲ့ ...
မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ …	မိုးမခမာတိကာစဉ်	About MoeMaKa (34)
MoeMaKa VDO (51)
Radio Program (90)
Maung Swan Yi (50)
U Win Tin (118)
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် (170)
ဇော်အောင် (မုံရွာ) (88)
Han Thit Naing (80)
Yan Lin Aung (8)
Yan Naung (Bo Ta Htaung) (202)
ကာတွန်း – အောင်မော် (64)
ကာတွန်း ATH (61)
ကာတွန်း ၀င်းအောင် (5)
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) (22)
သီဟ (စခန်းသစ်) (5)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္) (37)
မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ (217)
ရေခြားမြေခြား မြန်မာများ (151)
သမိုင်းနဲ့ အစဉ်အလာ (615)
လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ (215)
ဖြစ်ရပ်များ၊ အမှတ်တရများ (138)
Cartoon Box (1,543)
Twitter: moemakaဟန်သစ်နိုင် – သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်း ၁နှစ်ပြည့် မြင်ကွင်း http://t.co/3oy3s1Rwvt 02:20:00 AM April 24, 2015 ReplyRetweetFavoriteဟန်သစ်နိုင် – ဓမ္မစကူးလ် ဖောင်ဒေးရှင်း ၃ နှစ်ပြည့် နဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးမည် http://t.co/uLmkzdRMxs 02:09:36 AM April 24, 2015 ReplyRetweetFavoriteကာတွန်း စောငို – ၂၀၁၅ကို အကြို စောငို၏ ကာတွန်းဟောင်းများ (၇) http://t.co/dkGZtVy8zR 12:44:10 AM April 24, 2015 ReplyRetweetFavoriteမောင်တူး – တောထဲမှာ ကဗျာရေးသူ http://t.co/SAbuYUVDxD 06:41:12 AM April 23, 2015 ReplyRetweetFavoriteမောင်ရစ် – ဘိုးဘွားများနဲ့ စာပေမိတ်ဆွေများ ရာပြည့် အမှတ်တရ http://t.co/ArpPcDPAls 01:12:05 PM April 22, 2015 ReplyRetweetFavorite@moemaka Copyright © 2015 MoeMaKa Burmese News & Media. All Rights Reserved.
မိုးမခနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ရန်ကုန်ထုတ် မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း တွဲ၂၊ အမှတ်၎ ယနေ့ ထွက်ပြီ
By admin ရန်ကုန်ထုတ် မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း တွဲ၂၊ အမှတ်၎ ယနေ့ ထွက်ပြီ (မိုးမခ) ဧပြီ...Read more » မိုးမခ လစဉ် မဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၅ မတ်လထုတ် တကယ်ထွက်ပြီ
By admin မိုးမခ လစဉ် မဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၅ မတ်လထုတ် တကယ်ထွက်ပြီ (မိုးမခ) မတ် ၁၄၊...Read more » မိုးမခ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၂ တကယ်ထွက်ဖြစ်မည်
By admin မိုးမခ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၂ တကယ်ထွက်ဖြစ်မည်...Read more » ၂၀၁၅ နှစ်သစ်အတွက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ – မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အခု ထွက်ပြီ
By admin ၂၀၁၅ နှစ်သစ်အတွက် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၁ – မိုးမခလစဉ်မဂ္ဂဇင်း အခု...Read more » Recent CommentsDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေနဲ့ စစ်ဖက်ဆစ်သရဲDr. Maung Maung Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေနဲ့ စစ်ဖက်ဆစ်သရဲSan Hla Gyi on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေနဲ့ စစ်ဖက်ဆစ်သရဲDr. Zhivaka(Kambawza) on ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီး – ကွန်မြူနစ်တစ္ဆေနဲ့ စစ်ဖက်ဆစ်သရဲMyanmar Seaman on ဇာနီကြီး – ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်များလောက်တောင် ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ မရှိတော့ဘူးလားသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စာကို အနည်းဆုံး ၁ ဒေါ်လာ လှူပြီး မိုးမခကို ကူညီပါ	မိုးမခမှာ ကြော်ငြာပါ